4 AS waxay u dallacday inay dib u dhisto adkeysiga Indonesia iyo tartanka ka dib masiibada COVID-19
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » 4 AS waxay u dallacday inay dib u dhisto adkeysiga Indonesia iyo tartanka ka dib masiibada COVID-19
Wasaaradda Dalxiiska ee Indonesia iyo dhaqaalaha hal abuurka ayaa is dhexgalka bulshada horumarinta adkeysiga iyo tartanka si loo dhiirrigeliyo soo noolaynta ganacsiyada ka dib markii uu ku dhacay masiibada COVID-19.
Si loo gaaro yoolka, Wasaaraddu waxay abuurtay barnaamijyo diiradda saaraya mabaadi'da "4 AS": kuwaas oo kala ah Kerja KerAS (dadaal-shaqaale), CerdAS (shaqaale caqli badan), TuntAS (dhammaan), iyo IkhlAS (daacad ah). Wasaaraddu waxay rajo wanaagsan ka qabtaa in 4-ta AS ay noqon doonto qiyamka udub-dhexaadka u ah dalxiiska iyo warshadaha hal-abuurka si ay dib ugu dhistaan ​​ganacsigooda iyo soo noolaynta dhaqaalaha qaranka.
Mabaadi'da "4 AS" waxaa la aasaasay ka dib saameynta faafa ee COVID-19 ee dalxiiska iyo ganacsiga hal abuurka ah ee dalka oo dhan, halkaas oo ka hor inta aan la xaddidin xannibaadaha bulshada iyo dhaqaalaha si loo cabbiro faafitaanka fayraska, ay 16.11 milyan dalxiis ku yimaadeen 2019 ayna hoos u dhaceen 75 % ilaa 4.02 milyan sanadka 2020.
Dawladdu waxay ku hawlanayd hindisaha iyada oo u qaybinaysa dhiirigelinta soo kabashada dalxiiska iyo warshadaha hal-abuurka. Laga soo bilaabo qeybtii hore ee 2020, warshadaha dalxiiska ee Indonesia waxaa soo gaaray khasaaro dhan 85 tiriliyan Rupiah Indonesian ee dakhliga dalxiiska, iyadoo hoteelada iyo warshadaha maqaayadaha lagu qiyaasay inay lumiyeen ku dhawaad ​​​​70 tiriliyan Rupiah Indonesia.
Mid ka mid ah barnaamijyadu waa hindise ardayda dhigata dugsiyada hoyga ah ee Islaamka ee loo yaqaan "Santri Digitalpreneur Indonesia" kaas oo diiradda saaraya tababarka iyo la-talinta "santri" (ardayda) si ay u bartaan xirfadaha dhijitaalka ah oo ay u isticmaalaan caasimaddooda si ay u noqdaan digitalpreneur ama ka shaqeeyaan hal-abuurka warshadaha.